Yaa Yidhi Khilaafkii Xisbiga UCID waa la dhameeyay ? Akhriso Faallo |
Yaa Yidhi Khilaafkii Xisbiga UCID waa la dhameeyay ? Akhriso Faallo
Subaxii hore ee shalay waxa suuqa soo galay in khilaafkii xisbiga UCID uu dhamaaday ,Gudoomiyaha iyo Murashaxa madaxweyne ay markii u horaysay khilaafkii kadib kulmeen arintiina dhamaysteen.
Waxay ahayd saaka markii xarunta xisbiga shir jaraaid uu ku qabtay murashaxa madaxweyne ee xisbiga UCID mudane Jamaal Cali Xuseen ,xiliga Jamaal shirka jaraaid qabanayay waxa garabkiisa fadhiyay Gudoomiya xisbiga Mudane Faysal Cali Waraabe.
Hadaba inta aynaan u galin waxa Jamaal shirkaasi kaga hadlay ,bal marka hore aynu is waydiino Khilaafka Xisbiga UCID muxuu salka ku hayay?
Akhrista khilaafka xisbiga Kulmiye waxa uu bilaabmay markii lasoo gabagabeeyay shirkii xisbiga Kulmiye isla markaana murashaxa xisbigaasi loo doortay mudane Muuse Biixi Cabdi.
Sidaynu ka wada warqabno Dimuqraadiyada Somaliland waxay ku dhisantahay qabiil xisbiyadana waxa loogu codeeya Beelo ,Hadaba Maadama Muse Biixi iyo Jamaal Cali Xuseen hal beel kasoo wada jeedaan Gudoomiyaha xisbiga UCID waxa uu u arkay in arintaasi halis wayn ku tahay xisbigiisa,isla markaasna ay arintaasi jaanis buuxa siinayso koox uu sheegay in aan dalka lagu aamini karin oo uu garaadkooda garanayo ,dadka qaarna u fasirteen inuu ula jeedo xisbiga WADANI .isla markaana waxa uu Gudoomiye Faysal bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhan ah Jamaal Cali Xuseen.
Gudoomiye Faysal waxa uu si cad u sheegay in marka la gaadho shirka Golaha dhexe ee xisbiga lagu tartami doono ,xisbigana la qiimayn doono,isla markaana aanay jeerin meel xisbiga loogu xidhay Jamaal oo kaliya,sidoo kale Gudoomiye Faysal waxa uu mar walba meesha ka saarayay in khilaaf ka dhex jiro xisbiga UCID,waxa kale oo uu Gudoomiye Faysal sheegay in uu ilaa imka Xisbiga Murashax u yahay Jamaal cali xuseen.
Halkan ka Daawo Gudoomiye Faysal oo arimahaasi ka hadlaya.
Akhriste hadii aynu usoo noqono shirka Jaraaid ee saaka Murashaxa Madaxweyne ee Xisbiga UCID mudane Jamaal Cali Xuseen waxa uu ku sheegay in la dhameeyay khilaafkii xisbiga UCID oo isaga iyo Gudoomiyihii ay is barbar fadhiyaan waa sida uu hadalka u dhigay.haseyeeshee Gudoomiyuhu awal horeba ma sheegin in xisbiga khilaaf ka jiro.
Akhirste hadii waxa la isku khilaafsanaa ahaa shirka Golaha Dhexe ee xisbiga UCID in dhexdiisa lagu tartamo iyo inkale, Jamal arintaasi masoo hadal qaadin,mana sheegin in isagu toos u matali doono xisbiga doorashooyinka 2017ka iyo in kale.
Gudoomiye Faysal oo goobta fadhiyay afkiisa lagama maqal in Jamaal Murashax rasmiya yahay iyo in uu wali halkiisi hore taagan yahay shirka golaha dhexena lagu tartami doono.kaliya waxa uu madaxa ululay in khilaafka xisbiga la dhameeyay.
Markaa waxa is waydiin leh maxaa lagu heshiiyay? Wali waxa taagan su’aasha ah ”Shirka Golaha dhexe ee xisbiga ma lagu tartami doonaa mise Jamaal baa toos uga qayb galaya tartanka doorashada? ”
waar yaa yidhi UCID waa lagu heshiiyay?
Halkan ka Daawo shirka jaraaid ee saaka Jamaal qabtay.